Madaxwayne Farmaajo oo Sucuudiga Maanta u dhoofay, Falanqayn iyo Xog | Entertainment and News Site
Home » News » Madaxwayne Farmaajo oo Sucuudiga Maanta u dhoofay, Falanqayn iyo Xog
Madaxwayne Farmaajo oo Sucuudiga Maanta u dhoofay, Falanqayn iyo Xog
daajis.com:-Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa goor dhow u ambabaxay dalka Boqortooyada Sacuudi Carabiya, kaddib markii uu martiqaad uu ka helay Boqorka dalkaas.
Diyaarad Qaas ah oo calanka Boqortooyada Sacuudiga laheyd ayaa loo soo diray Madaxweyne Farmaajo, waana markii labaad ee Sacuudiga diyaarad u soo dirto, kaddib booqashadii rasmiga aheyd ee uu ku tagay bishii February ee sanadkan.
Safarkan waxaa ku weheliya Madaxwenaha xubno uu ka mid yahay Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ah Yuusuf Garaad Cumar iyo saraakiil ka tirsan Madaxtooyada.
Wararka ayaa sheegaya in Madaxweyne Farmaajo uu kala hadli doono Boqorka Sacuudiga, sidii loo fulin lahaa balan-qaadyo hore oo isugu jira taageero dhaqaale iyo mid mashaariic oo uu Sacuudigu balan qaaday markii Madaxweyne Farmaajo la doortay.
Dadka Falanqeeya arimaha Siyaasadda ayaa sheegaya in Dowladda Sacuudigu badashay Mowqifkeedii Soomaaliya, kaddib markii ay ku guuldaraysatay in ay cadaadis wax uga badasho Mowqifkii Soomaaliya ee arrinta Khaliijka.
Sucuudigu ayaa walwal wayn ka qaba inuu lumiyo doorkii siyaasadeed ee Soomaaliya, bacdamaa dowladaha Qadar, Masar, IRAN, Iyo Turkidu ay wadaan dadaal xooggan. Taas ayaana saldhig u ah Casuumadda ay mar kale Sucuudigu u fidiyeen Madaxwayne Farmaajo.